Namibia hivarotra elefanta dia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia Namibia » Namibia hivarotra elefanta dia
Drafitry ny Minisiteran'ny tontolo iainana, ala ary fizahan-tany Namibiana (MEFT) mba hisamborana sy hamarotana ny 170 amin'ireo elefanta mandehandeha farany eo amin'ireo faritra fambolena kaominaly avaratra andrefana sy avaratra atsinanan'i Namibia dia manaporofo ny fifandirana ary mety ho kapoka lehibe amin'ny indostrian'ny fizahantany efa miady an-toerana.
"Ny mpitsidika vahiny tsy tapaka dia manaraka akaiky ity fivoarana ity ary efa mandrahona amin'ny ankivy ny fizahan-tany Namibianina," izay hisy fiatraikany ratsy amin'ny fiarovana azy io, hoy i Izak Smit, olo-malaza amin'ny fiarovana ny liona any an'efitra.
MEFT tamin'ny herinandro lasa teo, nanao dokambarotra momba ny tolotra avy amin'ny orinasa mpamaky lalao Namibianina voasambotra hisambotra sy hanala elefanta 30 ka hatramin'ny 60 ao amin'ny faritra Omatjete, Kamanjab, Tsumkwe ary Kavango atsinanana.
"Noho ny haintany sy ny fitomboan'ny isan'ny elefanta ampiarahina amin'ny tranga fifanolanana amin'ny Olombelona-Elefanta, dia nisy ny famaritana ilaina hampihenana ireo mponina ireo," (sic) hoy ny doka.
Na izany aza, tsy nisy porofo manamarina nanohana an'io fitakiana io, miaraka amin'ny valin'ny fanadihadiana an-habakabaka tamin'ny volana aogositra 2019 ny mponina elefanta any avaratra atsinanana nefa mbola havoaka na eo aza ny fangatahana.
Toa fanapahan-kevitra ara-politika ny fangatahana tendrena satria ny mpiaro ny tontolo iainana dia tratry ny fiambenana noho ny tolo-kevitry ny tolo-kevitra, tsy misy resaka momba an'io fisamborana sy fivarotana mivantana io tamin'ny fivoriana vao haingana niadiana hevitra momba ny fanitsiana ny drafitra fitantanana elefanta any Namibia. Ny tolo-kevitra mivaingana hafa hanamafisana ny fifanolanan'olombelona elefanta dia nifanarahana tamin'ireo mpiantsehatra ihany koa, anisan'izany ny fanolorana teboka rano elefanta tsy lavitra ny tanàna, fefy herinaratra ary lalantsara elefanta izay manakana ny filan'ny fivezivezena.
Tsy fantatr'ireo tompon'andraikitra ambony MEFT ihany koa ireo tolo-kevitra ireo.
Ny fambara dia nihena ny isan'ny mponina, miaraka amin'ny haintany maharitra i Namibia izay nanapotika ny isan'ny lalao ary niteraka valan'aretina anthrax izay nateraky ny fatiantoka lehibe tao amin'ny elefanta Linyanti-Chobe.
Ny mpitondratenin'ny MEFT, Romeo Muyanda, dia nanamafy tamin'ny talata lasa fa fatin-elefanta 31 no hita teny amoron'ny reniranon'i Linyanti.
“Miahiahy fatratra izahay fa mety maty maty anthrax ireo elefanta raha jerena fa herinandro 12 talohan'izay dia hipopotama XNUMX no maty vokatry ny anthrax. Noraisina ny santionany hamaritana ny tena antony, ”hoy i Muyanda.
Nandritra ny atrikasa ofisialin'ny elefanta natao tao Windhoek roa herinandro lasa izay, Pohamba Shifeta an'ny MEFT dia namelabelatra izany ihany koa tamin'ny kabariny fanokafana izay nanamafisany fa manan-jo hamidy ny tahiry ivoara 50-taonina i Namibia. Na izany aza, voarara ny varotra ivoara ankehitriny araka ny lalàna mifehy ny CITES ary ny tolo-kevitra vao haingana nataon'i Namibia hanokatra varotra ivoara dia resy tanteraka.
Raha ny tatitry ny statistikan'ny elefanta afrikanina AfESG tamin'ny 2016 dia nisy elefanta 22 754 tany Namibia, Ny ankamaroan'ity vahoaka ity dia tombanana 17 265 ny elefanta dia ao anaty andiam-pandrosoana izay mifindra eo anelanelan'i Namibia, Angola, Zambia ary Botswana. Talen'ny National Resources Colgar Sikopo dia nanambara teo aloha fa tsy tafiditra tao anatin'ny tombatombana Namibianina ireo biby mandalo ireto.
Na izany aza tsy nety nandray anjara tamin'ny Fanisam-bahoaka Elefanta Lehibe i Namibia tamin'ny taona 2015 ary nandà ny fangatahana antsipirihany momba ny fanadihadiana na metodolojia nampiasainy. Misy fetran'ny fahatokisana betsaka amin'ireo vinavinan'ny mponina ireo izay mihoatra ny fetra fahatokisana 10% tadiavin'ny mpandinika ny habakabaka, ka mampametra-panontaniana raha toa ny famolavolana fanadihadiana an'habakabaka namibianina manome tombana marina momba ny isan'ny elefanta be mpampiasa izay mifindra eo amin'ny firenena efatra .
Ny elefanta sivifolo amin'ireo 170 dia ho voasambotra any amin'ireo faritry ny kaomina mifanila amin'ny zaridainam-panjakana Khaudom tsy misy fefy ary ny tombam-bidiny dia elefanta 3 000.
Ireo faritra ireo dia tanin'ny razan'i San teo aloha, miaraka amin'ny atsinanan'ny Kavango atsinanana dia niompana tanimbary 500 eo ho eo izay 2 500 hektara izay natokana ho an'ireo sangany ara-politika teo an-toerana nanomboka ny taona 2005. Fitrandrahana hazo goavambe sy tsy voafehy ataon'ny mpandinika hazo sinoa eto hatramin'ny 2017 fa namafa ny bois de rose afrikanina nitombo (Guiberto coleosperma).
Ny 80 hafa kosa dia hosamborina any amin'ny faritra fambolena sy fiompiana atsimo andrefan'ny Valan-javaboary Etosha izay ahalalana omby roa, ny kely iray amin'ny 30 indraindray dia mitsangatsangana hatrany Omatjete (300 km avaratra atsinanan'ny renivohitra Windhoek).
Na hisambotra ara-toekarena na ara-batana azo atao tokoa aza ny fisamborana ireo elefanta ireo, dia tena mampiahiahy tokoa, noho ny fanaparitahana azy ireo amin'ny faritra matetika tsy azo aleha. Ireo andiana omby avaratra-andrefana dia nihanaka nanerana ny tany lemaka midadasika sy marokoroko, fa ny faritra Kavango Atsinanana-Tsumkwe kosa dia lehibe kokoa ary miorina ao amin'ny Fasika Kalahari lalina tototry ny canopy hazo mavesatra.
Ny tender MEFT, izay voafetra ho an'ny lalao voasoratra anarana Namibianina hisamborana akanjo sy fanidiana ny 29 Janoary, dia mitaky ny fanesorana tanteraka ny elefanta rehetra, anisan'izany ireo ombilahy mitokana matetika, amin'ireo faritra ireo. Ny vidiny sy ny risika rehetra dia entin'ny orinasa misambotra lalao.
Ny tolo-tanana dia mety ho fanandramana hitazona ny latsa-pifidianana ambanivohitra taorian'ny fahombiazan'ny SWAPO tamin'ny fifidianana nataon'ny governemanta teo an-toerana farany teo ary misy ny toerana faran'izay mafy indrindra ao ambadiky ny drafi-pitrandrahana ara-barotra kelin'i Kavango Atsinanana ary ireo tantsaha ara-barotra lehibe kokoa any Kunene sy Erongo,
Natao ho an'ny tsenan'ny fanondranana ity tolotra ity, miaraka amin'ny tsipiriany miantso ireo ho mpanondrana mba hahazoana antoka fa hamela ny fanafarana azy ireo araka ny lalàna mifehy ny CITES ny firenena itodiana.
Toa tsy azo inoana fa te hanana elefanta bebe kokoa ny olona rehetra any Namibia, saingy misy tsena fanondranana iray ahazoam-bola be dia be: ny Repoblika Demokratikan'i Kongo sy ny filohany teo aloha, Joseph Kabila, izay nanangana toeram-piarovana lalao lehibe iray tany atsinanan'i Kinshasa. Nanomboka tamin'ny taona 2017, lalao lemaka an-jatony maro - anisan'izany ny zebra, kudu, oryx ary zirafy - no nafarana tany amin'ny DRC.
Izany dia mety mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny CITES izay mamela ny fanondranana elefanta mivantana ho any amin'ny toerana “mety sy azo ekena” izay faritana ho “programa fiarovana na in situ na faritra azo antoka any anaty ala ao anatin'ny faritra voajanahary sy ara-tantara any Afrika”.
Ny fotoana ihany no hanambara ny hoavin'ireo elefanta ireo raha tsy tokony hitranga ny fifindran-toerana misy fifandirana, miaraka amin'ny fihazana olona sy ny fihazana eo ambanin'ny Damage Causing Animal dia mamela fandrahonana misy ankehitriny.
Nosoratan'i: John Grobler
Manasongadina ny Nosy Mafia ho toy ny fanadihadiana tranga tsara ny tambajotra fizahan-tany manerantany
Ny fanamby ataon'ny Airbus kuantum computing dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny sidina maharitra